WAR CUSUB:C/Raxmaan C/Shakuur oo Dowladda Farmaajo Xog ka bixiye Sheegayna in ay tahay.. - Hablaha Media Network
WAR CUSUB:C/Raxmaan C/Shakuur oo Dowladda Farmaajo Xog ka bixiye Sheegayna in ay tahay..
HMN:- Musharax madaxweyne oo xilka kula tartamay madaxweynaha xilka haya ayaa ka dhawaajiyay qaabka ay ku shaqo bilowday dowladda Farmaajo inay tahay mid liita oo ku tiirsan dibadda.
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo hore u soo noqday wasiirka Qorsheynta dowladii KMG ahayd ayaa bartiisa twitter-ka ku soo qoray in dowladda ay tahay mid ku tiirsan dibadda.
RUUX HALKAN OO DAAWO MUUQAALKAN.
“Haddii aan runta ka hadlo dowladeenu waxay waxay sii noqoneysaa mid taag darran oo si weyn ugu xiran taageerada dibadda, taasoo sii xoojineysa ku tiirsanaan meesha ka saareysa isku tashiga..” ayuu qoraalkiisa ku yiri C/raxmaan C/sharkuur.
Wuxuu kaloo sheegay in taasi ay macnaheeda tahay in wadaddii isla xisaabtanka ay noqoto mid u dhaxeysa dowladda iyo deeq bixiyeyaasha, halkii la rabay shacabka, taasoo halis gelineysa sharcinimada dowladda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhowaan sheegay in dowladda Sacuudiga ay bixineyso dhaqaale lagu kabo miisaaniyadda, waxaana sidoo kale midowga Yurub ay sheegeen inay bixinayaan mushaarka ciidamada booliska.
Musharax C/raxmaan C/shakuur ayaa ololihii doorashada madaxweynaha ku galay qorshe loogu magac daray ISKU TASHI, kaasoo dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed ku dhisan, waxaana muuqata in madaxweyne Farmaajo aanu lahayn aragti ku saabsan habeynta dhaqaalaha dowladda iyo canshuuraha.